HTC Desire မျက်လုံးနှင့်ဆင် | Androidsis
ဆင်တစ်ခုသည် HTC Desire EYE သို့ခြေချသည့်အခါဤသို့ဖြစ်ပျက်သည်
HTC ကစတင်ခဲ့သည် HTC Desire EYE အလွန်ရှင်းလင်းသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် - UltraPixel နည်းပညာမည်မျှပင်ရှိပါစေ၊ ၄ မက်ဂါပစ်ဇယ်နောက်ကင်မရာကြောင့် HTC One M8 ကိုအသုံးပြုရန်ရွတ်ဆိုခဲ့ကြသူများကိုဆွဲဆောင်ရန်။
၁၃ မီဂါပစ်ဇယ်လ်ရှေ့ကင်မရာ HTC Desire EYE ၏ selfie စနစ်သည်အဓိကဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် HTC Desire EYE သည်ဆင်၏အရှိန်ကိုထိန်းနိုင်သလော။ ကြည့်ရအောင်
HTC Desire EYE နှင့်ဆင်အားမည်သူနိုင်မည်နည်း။
ထိုသို့များ၏ယောက်ျားလေးများသောကွောငျ့ဖွစျသညျ Digiate ၎င်းတို့သည် HTC Desire EYE အားသိသာထင်ရှားသည့်ခုခံနိုင်စွမ်းစမ်းသပ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ပထမ ဦး စွာသူတို့သည်ကွဲပြားသောရာထူးများထိသို့ရောက်အောင်စက်ကိုအချို့သောအမြင့်တွင်ချထားသည့်ပုံမှန်စမ်းသပ်မှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ပထမဆုံးစမ်းသပ်မှုအတွက်သူတို့သည် HTC Desire EYE ကိုခြေထောက်ပေါ်ချလိုက်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ကိရိယာ၏အောက်ပိုင်းအစွန်းသည်သက်ရောက်မှုကိုစုပ်ယူသည်။ ဤကိစ္စတွင်အတွက် terminal ကို မစစ်ဆေးဘဲစစ်ဆေးခြင်းကိုအောင်ပါ။ ခြစ်၏စုံတွဲတစ်တွဲနှင့်အနည်းငယ်သာအတူ။
ဒုတိယစမ်းသပ်မှုမှာအရာတွေကပြောင်းလဲသွားတယ်။ ဤကိစ္စတွင်အတွက် HTC Desire EYE သည်၎င်း၏ကျောတွင်ကျသည် နောက်ဘက်ထည်အချို့ပျက်စီးခြင်း, အနည်းငယ်သာအရာပေမယ့်ဗေဒပြီးသားနှောင့်အယှက်ခံစားနေရပြီး။
နောက်ဆုံးမှာတော့ဆင်စမ်းသပ်မှုအတွက်မဟုတ်ခဲ့ရင်တတိယမြောက်စမ်းသပ်မှုကတော့အခက်ခဲဆုံးပဲ။ ထိုအခါဤကိစ္စတွင်သူတို့ drop HTC Desire EYE မျက်နှာမျက်နှာပြင်ကိုမြေပြင်ပေါ်တွင်တိုက်ရိုက်ထိခိုက်ခြင်း။ ရလဒ်? မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းထိတွေ့မှုကချောချောမွေ့မွေ့နှင့်တိကျမှန်ကန်စွာဆက်လက်အလုပ်လုပ်နိုင်သော်လည်းမျက်နှာပြင်အက်ကွဲသည်။
ဒါပေမယ့်ကြီးစွာသောစမ်းသပ်မှုဆင်နှင့်အတူကြွလာ။ ရှုပ်ထွေးသော Mr. Elephant ၏အမည်အောက်တွင်အမည်များကိုဘာသာပြန်မထားကြောင်းသတိရပါ၊ တီဟီရန်တိရစ္ဆာန်ရုံမှဤရယ်စရာ pachyderm သည်လွယ်ကူသောရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သည်။ ရိုက်နှက်ခံထားရသော HTC Desire EYE အား၎င်း၏ယက်များဖြင့်နှိပ်စက်ပါ။
ဤကိစ္စတွင်အများအားဖြင့်သာမန်အရာမှာ HTC terminal သည်စာရွက်စာတမ်းကောင်းကောင်းဖြစ်လာသည်။ အဘယ်အရာကိုမျှအဖြစ်မှန်ကနေနောက်ထပ်ဖြစ်ပါတယ်။ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း, device ကိုပျက်စီးနေသည်ပေမယ့်နေဆဲအလုပ်လုပ်သည်။ ဒါကြောင့်အလုပ်လုပ်တဲ့အတွက်တွဲဖက်ဇာတ်ကောင်တွေ၊ pachyderm ကိုမှတ်ထားရအောင်၊ ဒီဗီဒီယိုမှ selfie သို့မဟုတ် self-portrait သည် terminal သည် device ရှိပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများနှင့်မီးလောင်ကျွမ်းနေသောပစ်စည်းများထဲတွင်ချန်ပီယံကဲ့သို့တည်ရှိသည်ကိုပြသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » HTC က » ဆင်တစ်ခုသည် HTC Desire EYE သို့ခြေချသည့်အခါဤသို့ဖြစ်ပျက်သည်
[APK] Google Chrome Beta 41 ကိုဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်သည်